Xulka Portugal Oo Noqday Xulkii Ugu Horeeyay Ee Ku Guulaysta National Leageu +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xulka Portugal Oo Noqday Xulkii Ugu Horeeyay Ee Ku Guulaysta National Leageu +SAWIRRO
Xulka qaranka Portugal ayaa noqday xulkii ugu horeeyay ee ku guulaysta tartanka UEFA National League kadib markii uu garaacay xulka qaranka Holland kulan xiiso leh oo labada xul ku dhex maray garoonka Estadio do Dragao.
Kulanka ayaa ahaa mid xiiso leh oo ay labada xul isku qaadayeen weeraro ay ku doonayeen in uu xulba xulka kale kaga hor maro goolka furitaanka ciyaarta u qabto hogaanka.
Xulka Portugal oo taariikh ahaan ka guulo badan ayaa u muuqday mid ka fir-fircoon xulka Holland halka uu xulka Holland u muuqday mid baqdin ku jirto oo aan si xoriyad ah u ciyaarayn.
Waxa ay labada xulba sameeyeen fursado yar oo aan aad u badnayn oo ay ka dhalin kareen goolal laakiin ay u suurtagali wayday in ay soo taabtaan shabaqa labada goolhaye.
Waxa bar-baro 0/0 ah ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay taageerayaasha labada xul daawadeen qaab ciyaareed ay ku qanceen si fiicana waliba ugu raaxaysteen.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayuu xulka Portugal ku bilowday ciyaarta mid ka dar-dar badan sidii hore iyaga oo weeraro ku qaadayay xulka Holland si ay goolal uga dhaliyaan.
Kadib weeraro is daba jooga ah iyo waliba fursado xulka Portugal ayaa dhaliyay goolka 1-aad daqiiqadii 60-aad iyaga oo uu dhaliyay xiddiga Goncalo Guedes kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/0 uu xulka Portugal ku hogaaminayo.
Xulka Holland ayaa bilaabay in uu la wareego maamulka ciyaarta iyaga oo raadinayay goolka bar-baraha halka xulka Portugal qaadayeen weeraro rogaal celis ah oo ay doonayeen in ay goolal deg-deg ah kaa dhaliyaan xulka Holland.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo uu xulka qaranka Holland sidaas ugu guulaystay koobka UEFA National League markii ugu horaysay ee la qabtay.